राशिफल – Page 17 – shubhabihani
Home / राशिफल (page 17)	राशिफल	तपाईंको आजको राशीफल ( बैशाख ३० गते बिहिवार )
100 Views तपाईंको आजको राशीफल ( बैशाख ३० गते बिहिवार )
कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ । आलोचना हुने भएकाले संयमित रहनुहोला । कुरा काट्ने प्रशंसा गर्न थाल्नेछन् ।
लेखनकार्यमा मन लाग्नेछ । मनमा उत्साह र हर्ष बढ्नेछ । न्यायिक कार्यमा अल्झन आउनेछ । भाग्य कमजोर रहेको हुँदा कार्य अधुरा रहनेछन् ।
धार्मिक भावनाको विकास हुनेछ । अनावश्यक समस्याले सताउनेछ । स्वास्थ्यमा सुधार आउनेछ । आर्थिक वृद्धि हुने देखिन्छ ।
अधुरा कार्य पूरा हुनेछन् । नवीन कार्यको थालनी हुनेछ । मानसिक अस्थिरता रहनेछ । व्यापार व्यवसायका लागि समय मध्यम रहेको छ ।
धर्मकर्ममा रुचि बढ्नेछ । अग्निभयको सम्भावना छ । राजनीतिक परिवर्तन हुनेछ । मानसिक नैराश्य बढ्नाले कार्य असफल रहनेछन् ।
भाग्यले साथ दिनेछ । धनलाभ हुनेछ । काममा सुधार आउनेछ । पारिवारिक मेलमिलाप बढ्नेछ । स्वास्थ्यमा सुधार आउनेछ । यात्रा हुनसक्छ ।
सम्मान प्राप्त हुनेछ । भेटघाटमा मन रमाउनेछ । अरूको मन जित्न सकिनेछ । सामाजिक कार्यमा गरिएका प्रयासहरू फलदायी रहनेछन् ।
बोलीको प्रभाव बढ्नेछ । आफन्तसँगको सम्बन्धमा सुधार आउनेछ । दिनको पूर्वाद्र्धमा लेनदेन नगर्नु होला । विश्वास गरेकाले धोका दिनेछन् ।
शारीरिक कमजोरी, मानसिक चञ्चलता बढ्नेछ । न्यायिक तथा सामाजिक कार्यमा सफलता मिल्नेछ । पतिपत्नीबीच प्रेम बढ्नेछ ।
अध्ययनअध्यापनमा मन लाग्नेछैन । स्वास्थ्यमा आंशिक सुधार हुनेछ । सञ्चार क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ । अनावश्यक चिन्ता बढ्नेछ ।
धनआर्जनमा अवरोध आउने देखिन्छ । सूचना आदानप्रदान हुनेछ । स्मरणशक्ति बढ्नेछ । अचल सम्पत्तिको नास हुनेछ ।
शारीरिक सौन्दर्यमा वृद्धि हुनेछ । पारिवारिक सद्भाव कायमै रहनेछ । व्यापार व्यवसायबाट सफलता मिल्नेछ । खर्च बढ्नेछ ।
अाजकाे राशिफल: वि.सं. २०७३ वैशाख २४ गते शुक्रबार तदनुसार ई. सं. २०१६ मई ०६ तारिख
110 Views मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) –
मन उत्ताउलो, भावुक र चञ्चल बन्नसक्छ । आजको प्रयास र कामधन्दाबाट दीर्घकालिक फाइदा पुग्न सक्छ, त्यसैले आफ्नो विचार र योजनालाई रचनात्मक रूप प्रदान गर्ने प्रयास गर्दा राम्रो हुनेछ । विशिष्ट व्यक्तिलाई प्रभावित तुल्याएर काम बनाउन सकिनेछ । नाम, दाम, प्रतिष्ठा र पुरस्कार प्राप्त हुनसक्छ ।
प्रतिकूल समय चल्दैछ । नचाहेको क्षेत्रमा खर्चको मात्रा ह्वात्तै बढ्नसक्छ । प्रशासनिक झैझमेला वा आरोप व्यहोर्नु पर्ने हुनसक्छ । प्रेम सम्बन्धमा तिक्तता आउने योग छ । तपार्इंले भने जस्तो काम सम्पन्न हुन कठिन छ । आफूले ताके अनुरूप काम नबन्नाले दिक्क लाग्नेछ । यात्राबाट फाइदा छैन ।
भाइबहिनी वा सन्ततिका तर्फबाट खुशीको खबर प्राप्त हुने छ । आर्थिक रूपमा सबल हुनुहुनेछ, कारोबारमा गतिशीलता आउने छ र व्यवसायबाट पनि राम्रै लाभ हुनेछ । मायाप्रेमका लागि समय जुट्ने छ । विपरीतलिङ्गीबाट आवश्यक सहयोग मिल्नेछ । पठनपाठनमा प्रगति हुनेछ, नयाँ ज्ञान प्राप्त हुने योग छ ।
प्रयाससाध्य समय छ धैर्य गरी मिहिनेत गरेमा कार्यसिद्धि हुनसक्छ । प्राविधिक काममा सफलता प्राप्त हुने छ । आत्मविश्वास जाग्नेछ । अभिभावकको आशीर्वादले काम गर्नसक्छ । श्रममूलक काममा मन जानेछ । स्वास्थ्य सबल रहने छ । व्यवसाय बढाउने वा नवीन रोजगारीको अवसर आउने छ ।
आज धार्मिक, सामाजिक वा सांस्कृतिक काममा खट्नु पर्ने दिन हो, जसबाट शुभ कुराको सङ्केत प्राप्त हुनेछ । परोपकार र धार्मिक क्षेत्रमा लगानी गरेमा राम्रो प्रतिफल प्राप्त हुनेछ । मनोरञ्जनमा भुलिने समय छ । सामाजिक यश, सम्मान र प्रतिष्ठामा बृद्धि हुनेछ । रोकिएका काम सजिलै सम्पन्न हुनेछन् ।
स्वास्थ्यमा अचानक गडबडी आउने सम्भावना छ । चोटपटकको भय पनि छ, बाटो काट्दा वा हातहतियारको प्रयोग गर्दा सचेत हुनुपर्छ । बेकारको विवादमा फँस्न सकिन्छ, बोलीमा अङ्कुश लगाएकै बेस हुनेछ । तपार्इंको व्यक्तिगत दृष्टिकोण उल्टो हुने देखिन्छ, आज कुनै पनि नयाँ काम नथाल्नु होला । ।
हाँसखेल, भ्रमण र मनोरञ्जनका क्रममा दिन बित्नेछ । सुरुमा घरपरिवारका सदस्य र साथीभाइसँग मतभिन्नता भएपनि अन्त्यमा उनीहरू सकारात्मक देखिने छन् । रमणीय र सुखद यात्राको योग छ । जीवनसाथी वा आमाको सल्लाहमा गरिएको काममा सफलता प्राप्त हुनेछ । बन्दव्यापारबाट राम्रै आय हुनसक्छ ।
आवश्यक र उपलब्धीमूलक रमाइलो यात्रा हुन सक्छ । सकारात्मक र व्यवहारिक सोचको विकास हुनेछ । स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले समेत यो राम्रो समय छ । आर्थिक लाभ हुनेछ । ऋणसापटी लिनदिन आजको दिन अनुकूल छ । पारिवारिक जीवन सामान्य र सन्तोषप्रद रहने छ ।
सन्ततिपक्षबाट खुसीको समाचार प्राप्त हुने छ । आफन्तले तपाईंको प्रशंसा गर्नेछन् । मन प्रफुल्ल र उत्साही बन्ने छ । घरपरिवारमा रमाइलो जमघट हुने छ । तपाईंले गर्न लागेको काममा सबैले साथ दिनेछन् र साँझमा दिनभरिका क्रियाकलापको लेखाजोखा गर्न मन लाग्नेछ । बुद्धिपक्ष र प्राज्ञिक क्षेत्रमा राम्रो छ ।
परिवारजनमा असमझदारी बढ्नेछ, मान्यजन वा अभिभावकवर्ग रुष्ट हुनसक्छन् । घरायसी सम्पत्तिको चिन्ताले सताउन सक्छ । विगतमा गरेको गल्ती र कमजोरीका कारण तनाव सिर्जना हुन्छ । महत्वाकाङ्क्षी योजनामा हात हाल्नु राम्रो हुँदैन । कृषि–चौपायाबाट हानि पुग्नसक्छ, बन्दव्यापारमा घाटा देखिन्छ ।
व्यवसायिक क्षेत्र सफल रहने छ, आम्दानीमा कमी आउने छैन । व्यापारिक वा दैनिक कामहरू सन्तोषजनक ढंगले सम्पन्न हुनेछन् । अर्थलाभका अवसर आउने छन् । तीर्थव्रत तथा देवालय आदिको भ्रमण हुन सक्छ । सामाजिक कामबाट प्रशंसा प्राप्त हुनेछ । दिदीबहिनी वा कुटुम्बका काममा सघाउनु पर्नेछ ।
आम्दानीमा कमी आउने छैन तर निरर्थक र प्रतिफल प्राप्त नहुने क्षेत्रमा धन लगानीको सम्भावना छ, त्यसैले सचेत रहनु होला । कृषि, पशुपालन र झिनामसिना घरायसी काममा समय खर्च हुनेछ । गरेका कामबाट ठूलो उपलब्धी लिन सकिंदैन र श्रमको समुचित मूल्याङ्कन नहुनाले दिक्क लाग्नेछ । पढाइलेखाइमा समय दिन सकिंदैन ।
राशिफल – मिति वि.सं. २०७२ साल कात्तिक १० गते मंगलबार तदानुसार इश्वी सन् २०१५ अक्टोबर २७ तारिख
255 Views राशिफल – मिति वि.सं. २०७२ साल कात्तिक १० गते मंगलबार तदानुसार इश्वी सन् २०१५ अक्टोबर २७ तारिख – पूर्णिमा व्रत,कार्तिक स्नानारम्भ
आस मारेको काम बन्नाले उत्साह जाग्नेछ। सानो प्रयत्नले ठूलो काम सम्पादन हुनेछ। गरेका कामबाट धेरैलाई फाइदा पुग्न सक्छ। सामाजिक काममा रुचि बढ्नेछ। एउटै कामबाट दोहोरो लाभ मिल्नेछ। विशेष योजनाहरू बन्नेछन्। धार्मिक अनुष्ठान र मंगलमय कृत्य सम्पादन हुन सक्छन्। व्यवसायमा प्रशस्तै लाभ हुनेछ। भाग्योन्नतिको समय छ।
एकपछि अर्को अवसर आउनाले मन प्रसन्न रहनेछ। आफन्त र साथीभाइबाट सहयोग तथा हौसला मिल्नेछ। सुन्दर पहिरनमा ठाँटिएर अरूको मन लोभ्याउन सकिनेछ। व्यवसायको सन्दर्भमा रमाइलो यात्रा हुन सक्छ। मनपर्ने भौतिक साधन जोड्ने समय छ। आम्दानी बढाउने काम सुरु गर्न सकिनेछ। अतिथिको रूपमा सम्मान पाइनेछ। मनग्य धनलाभ हुनेछ।
प्रयत्न गर्दा मौकाको फाइदा लिन सकिनेछ। यात्रामा विशेष लाभ होला। शत्रु र रोगबाट छुटकारा मिल्ने समय छ। मुद्दा–मामिलामा पनि विजयी भइनेछ। व्यापार तथा उद्योगतर्फ सामान्य फाइदा हुनेछ। अधिकारका लागि केही संघर्ष हुन सक्छ। प्रतिस्पर्धीहरूले अप्ठ्यारोमा पार्ने प्रयास गर्नेछन्। आफ्नो विषयवस्तुमा अरूले दाबी गर्न सक्छन्, सजग रहनुहोला।
अप्रिय समाचारले खिन्नता बढ्न सक्छ। पढाइलेखाइमा पनि ध्यान दिन नसकिए पनि व्यापार व्यवसायमा फाइदा उठाउन सकिनेछ। धैर्यले काम लिने समय छ। पशुपालन तथा कृषि क्षेत्रबाट भने सामान्य लाभ मिल्ने योग छ। बौद्धिक प्रतिस्पर्धामा विजयी भइनेछ। प्रतिष्ठित काम सम्पादन गर्ने मौका छ। सन्तान वा अनुयायीले प्रसन्नता दिलाउनेछन्।
उद्योग तथा व्यापारमा सामान्य फाइदा मिल्नेछ। शुभचिन्तकहरूले पूर्ण समर्थन नदिन सक्छन्। पुरानो समस्याले केही झमेला आइलाग्ला। दाम्पत्य सम्बन्धमा पनि केही असमझदारी बढ्न सक्छ। कृषि तथा पशुपालनमा खर्च बढ्नेछ। तापनि, नयाँ काममा हात हाल्न सकिनेछ। प्रतिस्पर्धाबाट लाभ मिल्नेछ। मेहनत गर्दा प्रशस्तै धन आर्जन हुने समय छ।
काम र पठन–पाठनमा लगनशील बन्न नसक्ता अरूले आलोचना गर्न सक्छन्। तपाईंको कमजोरीमाथि टिप्पणी हुन सक्छ, सचेत रहनुहोला। फाइदा कममात्र हुनेछ। बोलीको गलत अर्थ लाग्नाले सहयोगीहरू टाढिन सक्छन्। लेनदेनमा पनि विवाद बढ्ने सम्भावना छ। विगतको श्रमबाट भने लाभ हुनेछ। काम रोकिनुका साथै मानसम्मानमा आघात पुग्न सक्छ।
146 Views राशिफल – मिति वि.सं. २०७२ साल कात्तिक ९ गते सोमबार तदानुसार इश्वी सन् २०१५ अक्टोबर २६ तारिख
मकर – भो, ज, जि, खि, खु, खे, खो, गा, गि परिस्थितिले सोचेभन्दा फरक मोड लिन सक्छ। सहयोगीहरूले समेत हात झिक्नाले केही अप्ठ्यारोमा परिनेछ। सञ्चित रकम खर्च गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्न सक्छ। कृषि तथा पशुपालनमा खर्च बढ्नेछ। पारिवारिक असमझदारीले पनि काममा अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। तापनि, मेहनत गर्दा फाइदै हुनेछ। परिस्थितिसँग सम्झौता गर्नुपर्दा मन भने खिन्न रहनेछ।
129 Views मेष ( चु , चे , चो, ला , लि , लु , ले , लो , अ) Aries :